परिक्षणका क्रममा कोरोना भा’इरस वि’रुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिको मृ’त्यु, अझै पनि परिक्षण नरोकिने ! – AB Sansar
October 23, 2020 adminLeaveaComment on परिक्षणका क्रममा कोरोना भा’इरस वि’रुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिको मृ’त्यु, अझै पनि परिक्षण नरोकिने !
ब्रासिलिया, ७ कात्तिक । अस्ट्राजेनिका र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले तयार पारेको कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप दिइएका एक व्यक्तिको ब्राजिलमा मृ त्यु भएको छ । ब्राजिलको स्वास्थ्य सेवा विभाग एन्भिसाले तेस्रो चरणको परीक्षणका क्रममा उक्त खोप दिइएका व्यक्तिको मृ’त्यु भएको जनाएको छ । **** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ****
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले ब्राजिली नियामक निकाय एन्भिसाको सिफारिस बमोजिम खोप परीक्षण अभियान जारी रहने जनाएको छ । विश्वविद्यालयले क्लिनिकल परीक्षणका बारेमा सुरक्षात्मक कुनै समस्या नरहेको पनि बताएको छ । खोप निर्माता अस्ट्राजेनिकाले भने उक्त घ’टनाका बारेमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ । अस्ट्राजेनिकाले खोप अभियान रोक्ने वा स्थगित गर्ने बारेमा पनि केही बताएको छैन ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ****